Hisy vaomiera iombonan'ny tany roa tonta handinika sy handroso vahaolana mikasika izany. Manome fotoana hatramin'ny jona 2020 i Emmanuel Macron mikasika izany.
Tamin'ny 1979 no efa nisy fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana ny maha an'i Madagasikara madiodio ny îles éparses.
Giazan'ny Frantsay ho azy anefa ireo nosy kely ireo amin'izao fotoana. Efa nivoitra tamin'ny fihaonan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha frantsay teo aloha François Hollande ny fiaraha-mitantana (cogestion) ny îles éparses. Hanova an'io ve i Emmanuel Macron ?
Nasain'i Andry Rajoelina ho vahiny manokana mandritra ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ny filoha frantsay amin'ny 26 jona 2020 i Emmanuel Macron.